တရုတ် အွန်လိုင်း ဂိမ်း အသစ် ၆၀ တရားဝင် အတည်ပြု - Pandaily
တရုတ် အွန်လိုင်း ဂိမ်း အသစ် ၆၀ တရားဝင် အတည်ပြု
Jun 08, 2022, 12:54ညနေ 2022/06/08 14:06:34 Pandaily
တရုတ် စာနယ်ဇင်း နှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝ ေရေး အစိုးရMiHoYo, Migu Interactive Entertainment နှင့် Hero Games စသည့် ကုမ္ပဏီ များပါ ၀ င်သည့် စုစုပေါင်း ဂိမ်း ၆၀ အပါအ ၀ င် ပြည်တွင်း အွန်လိုင်း ဂိမ်း အသစ် များအတွက် စည်းမျဉ်း သတ်မှတ် သူများ၏ ဇွန်လ ခွင့်ပြုချက် အသေး စိတ်ကို အင်္ဂါ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဤသည်မှာ ယခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက် မှု ကိုဖြတ်သန်း သွားသော အွန်လိုင်း ဂိမ်း များ ၏ဒုတိယ အသုတ် ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် April ပြီလ တွင်တရုတ် အွန်လိုင်း ဂိမ်း ၄၅ ခုကို တရားဝင် ဖြန့်ချိ ရန်နှင့် လည်ပတ် ရန် လိုင်စင် ရရှိခဲ့သည်။ သတင်းများအရ တရုတ် ၏အယူအဆ ဂိမ်း စတော့ရှယ်ယာ များ၏ ယူအက်စ် စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် မြင့်တက် လာခဲ့ပြီး ဘူတာ B သည် ၅% ကျော် မြင့်တက်ခဲ့ပြီး NetEase နှင့် Butterfish တို့သည် ၂. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Tencent နှင့် NetEase ဂိမ်း အသစ် များသည် နောက်ဆုံး အတည်ပြုချက် တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု လုံး၏ စျေးကွက် ဝေစု သည် ၆၀% ကျော်ရှိသည်။ သို့သော် စျေးကွက် လေ့လာသုံးသပ် သူများက ၎င်းတို့သည် ဂိမ်း ထုတ်ဝေ ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက် များကို လက်လွတ် မည်မဟုတ် ကြောင်းနှင့် ဂိမ်း အသစ်များ သည် ပြည်တွင်း စျေးကွက် စီးပွားရေးကို တိုးတက်မှု လမ်းကြောင်း သို့ပြန်လည် ရောက်ရှိ စေမည် ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
COVID-19 ကဲ့သို့ သောအချက် များကြောင့် Q2 ဂိမ်း ကုမ္ပဏီများသည် ယခုနှစ်တွင် ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းခွင် ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ရင်ဆိုင်ရ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အရွယ် မရောက်သေး သူများ၏ စွဲလမ်း မှုကိုတားဆီး ရန်ရည်ရွယ် သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များအရ ဂိမ်း ဖြန့်ဖြူး ခြင်းကဲ့သို့သော စီးပွားရေး ကဏ္ sectors များလည်း ထိခိုက် ခဲ့သည်။
Tencent ၏ထိပ် တန်း စီးပွားရေး တန်ဖိုး မြှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ (၎င်း၏ ဂိမ်း များနှင့် လူမှုကွန်ယက် ဝင်ငွေ များအပါအ ၀ င်) သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Q1 တွင် ယွမ် ၇၂. ၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၀. ၉ ဘီလီယံ) ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၀. ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ တိုးတက်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း စျေးကွက် တွင် ဂိမ်း ၀ င်ငွေသည် ၁% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ယွမ် ၃၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄. ၉၅ ဘီလီယံ) သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် လူငယ် ကာကွယ်ရေး အစီအမံ များ၏ တိုက်ရိုက် နှင့် သွယ်ဝိုက် သက်ရောက်မှုများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဂိမ်း စက်ရုံသည် April ပြီ လတွင် ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၃ ၄၁ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
အစောပိုင်းက တရုတ် ၏တရားဝင် ထုတ်ဝေ မှုနှင့် လည်ပတ်မှု ခွင့်ပြု ချက်ကို မည် သည့်အချိန်တွင် ထုတ်ပြန် မည် နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာ မှုများ ရှိခဲ့ပြီး ဂိမ်း ကုမ္ပဏီများသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်အတွက် သူတို့၏ မျှော်လင့် ချက်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် လျှော့ချခဲ့သည်။ Gamma Data 2021 China Game Industry Report အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ တရုတ် ဂိမ်း ဈေးကွက် ရဲ့ ဝင်ငွေ ဟာ ယွမ် ၂ ၉၆. ၅ ၁၃ ဘီလျံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄. ၄၈ ဘီလျံ) ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၆. ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုး လာကာ ၂၀၂၀ မှာ ၂၀. ၇၁ ရာခိုင် နှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ရင် သိသိသာသာ နှေးကွေး သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိုဘိုင်း ဂိမ်း ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၂၂၅. ၅ ၃၈ ဘီလီယံ ရှိပြီး စုစုပေါင်း ဝေစု မှာ ထပ်မံ မြင့်တက် လာခဲ့သည်။
Tencent, Alibaba, B-station မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ သော အပြာရောင် စကားလုံး ဂိမ်း
တရုတ် မိုဘိုင်း ဂိမ်း တီထွင် သူနှင့် ထုတ်ဝေသူ Celadon Games သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် တနင်္လာနေ့တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။
Gaming Dec 08 ဒီဇင်ဘာ 9, 2021